राष्ट्रिय आन्दोलन हुन्छ विश्वास गर्नुस् | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » राष्ट्रिय आन्दोलन हुन्छ विश्वास गर्नुस्
राष्ट्रिय आन्दोलन हुन्छ विश्वास गर्नुस्
बालुवाटार घेराउको क्रममा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य शैलेन्द्र साहसँग आन्दोलनस्थलमा भेट भयो । चर्कोघामका कारण एउटा गल्लीको भित्तामा अडेस लागि झण्डा बोकेर सुस्ताइ (अराम) गरिरहनु भएका साहको अनुहारमा मधेश आन्दोलन जतिकै उत्साह थियो । सप्तरीको भारदहमा आन्दोलन हुँदा अग्रभूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएका शैलेन्द्र साह काठमाडौ केन्द्रीत आन्दोलन र मधेश आन्दोलनको आआफ्नै महत्व रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँसँग गरिएको छोटो कुराकानी यस्तो छः
मधेशमा छ महिना आन्दोलन गरेर काठमाडौ पस्नु भएको छ, कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
–मधेश आन्दोलनमा जुन इनर्जिका साथ आन्दोलन गरेका थिए त्यही इनर्जि अहिले पनि छ । ममा मात्रै होइन । यहाँ जति जना छ सबैमा उस्तै इनर्जि छ । फरक यति हो, हामी मधेशमा आन्दोलन गर्दा राज्यले त्यति वास्ता गर्दैन्थ्यो अब राज्यको आँगनमै आएर आन्दोलन गरिरहेका छौ । यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
६ महिनासम्म आन्दोलन गर्दा नसुन्ने राज्यको आँगनमै आएर आन्दोलन गरेपछि कतिको सुन्छ त ?
–राज्यको रवैया हेर्दा मलाई विश्वास लाग्दैन कि यति गर्दा पनि सुन्छन् तर हामी सुन्न बाध्य पार्छौ यति विश्वास गर्नुस् ।
–पहिला हामी मधेशमा आन्दोलन गर्दा विखण्डनवादी, क्षेत्रियतावादी, मधेशी भनेर हेप्थ्यो । आन्दोलनलाई महत्व दिँदैन्थ्यो । तर अहिले देशमा ८० प्रतिशत समुदाय एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् र राज्यकै कानमै गएर भनि रहेका छन् हाम्रो अधिकार खै । यति गरेपछि किन राज्यले सुन्दैन, आज न भोली सुन्नुपर्छ ।
मधेश आन्दोलन र काठमाडौ केन्द्रीत आन्दोलनमा के फरक पाउनु भयो ?
–खासै फरक छैन । एजेण्डा उही, नारा उही, मुद्दा उही ठाउँ मात्र फरक भएको छ । त्यति हो । त्यहाँ मधेशमा मात्र आन्दोलन हुन्थ्यो । राष्ट्रिय आन्दोलन हुँदैछ । मधेशको मुद्दा अब देशकै मुद्दा बनेको छ । मधेशले विस्तारै राष्ट्रिय रुप धारण गर्दैछ ।
मधेश आन्दोलनको महत्व के थियो र यो काठमाडौ केन्द्रीत आन्दोलनको महत्व के छ ?
–महत्वको कुरा गर्ने हो भने अवश्य पनि फरक छ । एउटै एजेण्डा, एउटै मुद्दा भएपनि महत्वको हिसाबले फरक छ । यदि महत्व फरक नभएको भए आज गठबन्धन बनाएर काठमाडौमा आन्दोलन गर्नु पर्दैन्थ्यो । महत्व फरक भएका कारणले नै दुई दिन सिहदरवार र आज बालुवाटार घेरेका हौं ।
महत्वमा के फरक छ ?
–हामी मधेशमा आन्दोलन गर्दा मधेशमै सिमित हुन्थ्यो । राज्यको कानसम्म पुग्दैन्थ्यो । पुगे पनि नसुने जस्तो गथ्र्यो । आफ्नै भूमिमा विशेष खालको आन्दोलन हुन्थ्यो । आफ्नै पहिचान, आफ्नै सँस्कृति र हावापानीमा आन्दोलन हुन्थ्यो त्यसैले त्यसको महत्व छ । यहाँ काठमाडौमा आन्दोलन गर्दा पुरै देशको मात्र होइन विश्वको ध्यान खिचेको छ । यो राष्ट्रिय आन्दोलन जस्तो भएको छ । मधेशी, आदिवासी जनजातिहरुको साँच्चिकैको पीडा रहेको छ भने कुरा काठमाडौले बुझ्यो । यहाँको जनताले पनि महसुश गर्यो ।
आज त घेराउ कार्यक्रम सकिदैछ अब भोलीदेखि के हुन्छ ?
–भोली रत्नपार्कमा जनसभा छ । जनसभापछि आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रमहरु सार्वजनिक हुन्छ । अब यो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । आन्दोलन निरन्तर चलाएर राष्ट्रिय आन्दोलनको रुपमा दिनुपर्छ र अन्तिम धक्का राज्यलाई दिनुपर्छ ।
–छ, सम्भव छ । चार दिनदेखि काठमाडौमा आन्दोलन भइरहेको छ । अवस्था मापन गर्दा राष्ट्रिय आन्दोलन उठाउने अवस्था छ । गठबन्धनले अलिकति व्यवस्थामा ध्यान दियो भने आन्दोलन सम्भव छ ।